Fangatahana hisoratra anarana any am-piasana maimaimpoana | Androidsis
Ireo freelancer sy orinasa dia mahazo tombony amin'ireo fitaovana samihafa misy ahafahana miasa na amin'ny birao na ivelan'izany. Rehefa mandeha ny fotoana dia mihoatra ny 70% ny Ny SME sy ny orinasa dia efa manana fisoratana anarana hisoratra anarana any am-piasana, satria tsy ilaina ny manao outlay mba hametrahana iray.
Izy io dia manana fifehezana fotoana amin'ny mpiasa tsirairay, raha ny tena miasa kosa dia ho afaka mitazona isa isaky ny andro nanatanterahana. Android dia manana maro an'isa amin'izy ireo aza mba hahazo tatitra ankapobeny indray mandeha isam-bolana, miaraka amin'ireo fiasa hafa.
1 Midira any am-piasana
2 Firaketana ny asa
3 Ora miasa 4b
4 Fanaraha-maso ny fandaharam-potoana
5 Fanaraha-maso ny fotoana
6 Fanaraha-maso ny fotoana (Bixpe)
8 Clock an'ny mpiasa - Fanaraha-maso ny ora fiasana
9 365 Chrono - Fanaraha-maso ny fandaharam-potoana sy ny fandaharam-potoana
Midira any am-piasana
Izy io dia mety ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra raha ny amin'ny sonia any am-piasana, rehetra nefa tsy manao fampiasam-bola amin'ny efijery fanaraha-maso. Ny lalàna momba ny didim-panjakana dia nametraka fa tsy an-kanavaka ny orinasa sy ny mpiasa tsy miankina rehetra tsy maintsy manatanteraka ny fifehezana ny ora ho an'ny mpiasa.
Miaraka amin'ny File any am-piasana azonao fitaovana roa, ny fifehezana ny fidiran'ny olona rehetra tafiditra ao anaty tranonkala sy fampiharana ho an'ny fitaovana Android rehetra, misy koa ny kinova ho an'ny IOS. Ny interface dia tsotra be raha ampiasaina amin'ny orinasa rehetra amin'ny fampifanarahana tanteraka.
Ny rindranasa dia manana maody roa, ny voalohany dia ny famelana ny mpiasa hiditra amin'ny angon-drakitra manokana ananany, miditra sy mivoaka ny asa amin'ny findainy manokana. Ny fomba faharoa dia miasa ka ny mpanjifa izay maniry azy dia mamela ny mpiasa hiditra eo amin'ny toeram-piasana, raha izany dia tsy mahazo miditra amin'ny angon-drakitra ireo mpiasa avy amin'ny fampiharana ary tsy afaka misoratra anarana na miditra na mivoaka.
Firaketana ny asa
Izy io dia rindranasa mahery vaika hifehy ny ora fidirana sy fivoahana amin'ny asa, miaraka aminy ianao dia afaka manasonia mba hitazomana ny fitsipiky ny ekipa iray manontolo. Job log dia fitaovana haingana, tsotra sy mora, ny interface tsara dia madio sy madio.
Ampio ny ora isaky ny mpiasa, manaova totalina ary zarao isan-kerinandro ary ny zavatra rehetra dia miaraka amin'ny kely indrindra tokony hatao, izay manodidina ny 40 ora isan-kerinandro. Manampia fanesorana mandeha ho azy ny fiatoana ary fanitsiana ny fe-potoana fandoavam-bola isam-bolana.
Ankoatr'izay, Job Registry dia manana fanampiny fanampiny mahaliana, ao anatin'izany ny fandraisana ny varotra sy ny toro-hevitra raha misy amin'ny asa vita. Ny zavatra tsara dia ny fahaizana mijery mandritra ny ora rehetra, na isan-kerinandro, isam-bolana na isan-taona, satria mazàna dia mitahiry izany ao anaty tahiry.
Ora miasa 4b
Fampiharana tena mahaliana izy io hanarahana ny ora fiasana, satria azonao atao ny manampy ny miasa, ny fiatoana ary manerantany raha tianao. Ny interface izay asehony dia tena intuitive, manao izany amin'ny fototra izy fa amin'ny farany dia izay no mandeha.
Mampiseho tabilao isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana ary amin'ny volana nampiasanao azy, noho izany azonao atao ny manana ny fifehezana rehetra amin'ny app. Tena mety ny mitondra ny asan'ny olona iray na maromaro, tsy manana tanjona ara-barotra izy io, fa kosa manao kajy ankapobeny mba hananana ny zava-drehetra.
Anisan'ireo mampiavaka azy, miavaka amin'izany ny famoahana ora tsy tapaka, ora fanampiny, fiatoana isan'ora, bonus, fandaniana, kisary ary naoty hanoratanao izay rehetra tadiavinao. Ny fampiharana dia mamela ny fisintomana ny ora rehetra ao amin'ny CSV, PDF ary antontan-taratasy. Ahitana doka amin'ny kinova maimaimpoana.
Fanaraha-maso ny fandaharam-potoana
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mifehy ny ora fidirana sy fivoahan'ny andro fiasana, tonga lafatra ho an'ny olona miasa tena, fa ho an'ny mpandraharaha ihany koa. Ao amin'ny kinova maimaim-poana dia azonao atao ny mifehy ny zava-drehetra avy amin'ny findainao, takelaka ary solosainao, satria misy ao amin'ny Windows ihany koa io.
Raha vantany vao manomboka ny andro ianao dia manomboka amin'ny fiandohana, dia isaina ny fotoana voatondro ho an'ny andro, fa azonao atao kosa ny mampiato azy mandritra ny fiatoana, na ho an'ny sakafo maraina na atoandro. Ampiasaina amin'ny orinasa io mba hitazomana ny mpiasa tsirairay ao aminy, miditra sy mivoaka.
Ny fanaraha-maso ny fotoana dia mamela anao hanao sonia amin'ny PINHo an'ity dia tsy maintsy ahitsy izy io raha te hanana input sy output, ka mitazona ny tsiambaratelon'ny anarana, anarana sy anarana hafa ary angon-drakitra ampidirin'ny orinasa. Mampiseho ny ora isan'andro, isan-kerinandro ary isam-bolana, manao manerantany hahitana ny fahombiazana isan'ora.
Toy ny amin'ireo rindranasa hafa dia ilaina tokoa ny te-hifehy ny asan'ny andro, isan-kerinandro sy isam-bolana amin'ny karazana asa rehetra. Ny fanaraha-maso ny ora dia manisa izay rehetra mandeha, mamaky ny ora niasana tamin'ny ora fitsaharana, satria voarakitra ao amin'ny fidirana, fiatoana ary fivoahana izany.
Ny zavatra tsara dia ny ahafahanao manitsy ny ora niasana isan'andro, jereo ny famintinana isam-bolana, isan-taona ary tahirin-kevitra mahaliana hafa ho an'ny mpampiasa iray na maromaro. Mpiasa iray na maromaro no tafiditra ao, hiankina amin'ny fampiasana azy io manokana (Miasa tena) na amin'ny maha orinasa anao, ao anatin'ireto profil maromaro ireto dia ampidirina.
Ny fanaraha-maso ny fotoana dia ahafahanao manondrana angona mandritra ny herinandro maro, alina, volana na taona maro, izany rehetra izany dia ho tsipiriany ao amin'ny tatitra alaina amin'ny PDF sy endrika hafa. Milanja manodidina ny 5 megabytes ny fampiharana, misy fampidinana 100.000 XNUMX ananany ary nohavaozina tamin'ny Oktobra tamin'ny taona lasa.
Developer: Kaody apptitude
Fanaraha-maso ny fotoana (Bixpe)
Bixpe dia fantatra amin'ny maha iray azy amin'ny fampiharana mifehy ny asan'ny olona tsirairay, saingy misy ny safidy amin'ny fanaovana azy amin'ny vondrona asa. Izy io dia fitaovana tsara indrindra hanasoniavana ny fifandraisana amin'ny asasatria azo alaina ho an'ny Android, iOS ary Windows.
Ny fampiharana dia mamela anao hanampy amin'ny profil samihafa, miaraka amin'ny anarany, anaram-bosotra, nomena toerana ary data sy fampahalalana hafa hananana fifehezana faran'izay betsaka. Avelao ny famantaranandro isan'ora, ampio fiatoana sy fiatoana amin'ny andro fiasana, geolocation amin'ny mpiasa amin'ny fotoana tena, tatitra sy data mandritra ny andro mandritra ny andro, herinandro, volana ary taona.
Ahafahanao manao sonia amin'ny PIN, kaody izay tsy maintsy apetraka amin'ny mpiasa tsirairay, Ilaina ny manana azy io amin'ny fidirana sy fivoahana, satria io no fidiran'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny mpitantana dia afaka manamarina ireo ora niasana sy fampahalalana hafa tamin'ny alàlan'ny fampiharana, nefa koa amin'ny alàlan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny data (mailaka sy teny miafina).
Fampiharana izy io hahafahana miditra ao am-piasana amin'ny fomba haingana, saingy ity iray ity dia mandeha lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fananana safidy fanampiny betsaka kokoa ho an'ny hafa. Factorial HR dia manana maodely telo misy ary ireto manaraka ireto dia: Essential, Business and Enterprise.
Izy io dia ahafahanao manao sonia ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa, fa manampy an'io koa ny tsy fahatongavana (ho an'ny fialan-tsasatra, fialan-tsasatra na fialan-tsasatra), tabilao fandaminana asa ary mpitantana antontan-taratasy hizarana. Ny fanondranana ireo ora niasana dia atao amin'ny PDF, antontan-taratasy misy ny pitsopitsony rehetra ho an'ny talen'ny talen'ny fitantanana.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fahaizana mampiasa ireo kinova samihafa, saingy misy ny kinova fampiasana roa herinandro, na dia misy aza ny kinova maimaim-poana ho an'ny telefaona Android. Azonao atao ny manoratra ny ora hahatongavana, satria miaraka amin'izany no hahitanao ny antsipiriany rehetra momba ny fotoana mahamety indrindra. Manana fisintomana 10.000 XNUMX eo ho eo izy io ary fampiharana mahaliana raha ampitahaina amin'ny hafa.
Clock an'ny mpiasa - Fanaraha-maso ny ora fiasana
Ny fampiharana Tonga iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra i Duocom rehefa afaka mifehy ny zava-drehetra eo amin'ny tontolon'ny fidirana sy fivoahan'ny mpiasa. Io dia ahafahanao misoratra anarana rehefa miditra ianao ary mamela ny andro amin'ny tsindry iray monja, manampy tantara hahafantarana ireo ora fiasan'ny mpiasa tsirairay.
Ampidiro amin'ny sari-tany ny sarintany hahafantarana ny toerana misy ny mpiasa tsirairayNy geolocation no anaovana ny zava-drehetra ary lasa zava-dehibe izany raha mila mitady olona ianao amin'ny fotoana marina. Manampia kalandrie hampiharana ny andro, makà naoty ary omeo fialantsasatra ny tsirairay amin'izy ireo.
Izy io dia multiplatform, miasa tanteraka amin'ny telefaona finday sy PC izy io, mifandray eo anelanelan'ny roa, afaka miditra ianao miaraka amin'ny fampiharana apetraka amin'ny telefaonan'ny mpiasa tsirairay. Mpiasa miisa 20 no azo ampiana ary ny zavatra tsara indrindra dia ny afaka manome ny tsirairay ny asa ao anatin'ny tontolon'ny fitaovana.
Developer: Duocom Europe, SL
365 Chrono - Fanaraha-maso ny fandaharam-potoana sy ny fandaharam-potoana
365 Crono no fitaovana tonga lafatra ho an'ny orinasa sy mpiasa tsy miankina amin'ny alàlan'ny fihazonana fifehezana fotoana ny fidirana sy ny fivoahana isaky ny andro fiasana. Voasoratra eo amin'ny fidirana sy ny fivoahana izy io, mamela ny fiatoan'ny asa, mamorona tatitra PDF, miditra amin'ny fandaharam-potoanan'ny mpiasa rehetra amin'ny tsindry roa mahery.
Ny fiasan'ny fampiharana dia ahafahanao misafidy andro sy miditra ny ora fiasana, na ora mivantana miaraka na tsy misy fitsaharana izy ireo. Midira fety na fialan-tsasatra koa handao ny saha mba hahafahan'ny mpiasa tsirairay miala sasatra.
Mahatsiaro ny fotoana hidiranao ny fampiharana ary mampitandrina anao mialoha hatrany, ka tsy hohadinoinao mihitsy ny fidirana sy ny fivoahana, fampitandremana tsara. 365 Crono dia mamela ny fidirana amin'ny tranonkala hahafantatra ny zava-drehetra momba ny fampidirana sy ny fivoahana, saingy ilaina ny fifandraisana amin'ny mpamorona ny fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fangatahana hisoratra anarana any am-piasana maimaimpoana